အလွမ်းပြေ စကားတွေ ပြောနေတဲ့ စံရတီမိုးမြင့် ရဲ့ ရင်ဖို စရာ ဗီဒီယိုလေး – Shwe Sar
မင်းသမီး ချောလေး စံရတီမိုးမြင့် ဟာ အောင်မြင် နေတဲ့ ထိပ်တန်း မင်းသမီး တွေ ထဲမှာ တစ်ယောက် အပါအဝင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်အနုပညာ လှုပ်ရှားမှု အနေနဲ့ ဗီဒီယို ဇာတ်ကားတွေ အပြင် ကြော်ငြာတွေ များစွာ ကို ရိုက်ကူး ထားတာဖြစ်ပါတယ် … . ။ လက်ရှိ မှာလည်း စံရတီမိုးမြင့် က ပရိသတ် တွေရဲ့ အချစ် တွေကို အပြည့်အဝ ရရှိ နေခဲ့ပြီး အနုပညာ အလုပ်တွေ ကို လည်း အကောင်းဆုံး ကြိုးစား လုပ်ကိုင် နေတာ ဖြစ်ပါတယ် … . ။
သူမ က ရိုးရှင်း လှပတဲ့ မျက်နှာလေး ကို ပိုင်ဆိုင် ထားပြီး သွယ်လျ လှပတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာလေး ကြောင့် ဘယ်လို ဖက်ရှင် တွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် လိုက်ဖက် ညီစွာလှပ နေတဲ့ သူလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်လတ်တလော မှာ လည်း ကပ်ရောဂါ ကြောင့် အနုပညာ အလုပ်တွေ ရပ်နား ထားခဲ့ရပေမဲ့ ပရိသတ် တွေနဲ့ အဆက် သွယ် မပြတ် သွားအောင် လည်း ချစ်စရာ ပုံလေးတွေ ကို ဖော်ပြပေး ပါတယ် … . ။
ယခုမှာ လည်း စံရတီမိုးမြင့် က အပြင် သွားရင်း လွမ်း နေတဲ့ ပရိသတ် တွေ ကို live လေးလွှင့် ပြီး တရင်း တနှီး စကားတွေ ပြော ခဲ့တဲ့ ဗီဒီယို လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ် vဒါ့အပြင် စကားပြော နေတဲ့ ပုံစံလေး ကလည်း ချစ်စရာ ကောင်းနေပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ ပင်ကိုယ် အလှတရား တွေ ကလည်း အထင်းသား ပေါ်လွင် နေခဲ့ပါတယ် … . ။ ကဲ … ပရိသတ် ကြီးရေ မင်းသမီး ချောလေး စံရတီမိုးမြင့် ရဲ့ ချစ်စရာ live ဗီဒီယို လေးကို ပြန်လည် ဖော်ပြပေး လိုက်ပါ တယ် နော် … . ။
Previous post ပုရိသတွေ ရင်ခုန်သံ မြန်အောင် မိလွန်းနေတဲ့ ပုံတွေ တင်ပေးလိုက် တဲ့ မော်ဒယ် ဝင်းရွှေရည်သင်း
Next post VITAMIN VIT C သောက်ကျပါလို့ ဆိုလိုက် တဲ့ ပြည်သူ ချစ်တော် မင်းသမီး သင်ဇာဝင့်ကျော်